Kedu ka m ga esi mepụta backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị akwụ ụgwọ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ kama ịme ngwa ngwa ịchọta ndị akwụ ụgwọ - ikekwe ịmeela mkpebi siri ike. Ka anyị chee ya ihu - itinye aka maka ịzụ ahịa njikọ mgbe ụfọdụ nwere ike iyi mgbalị siri ike. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na enwere ọganihu dị elu maka imebi nsogbu gị n'ọganihu ugbu a, kama ịba uru site na nrụpụta ọ bụla na-adịgide adịgide na okporo ụzọ, CTR, ntọghata, wdg.Ihe bụ na ugbu a, Google na-emesi ike iji nweta nanị ogo na njikọ usoro njikọ. Ọ pụtara na ịmepụta backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ n'ụzọ ziri ezi ị ga-etinye ego na mgbalị iji nweta naanị akwụkwọ weebụ na blọọgụ ndị ọzọ dị mkpa - linux hosting provider.Ọfọn, echiche nke oge a nke ogo na ụlọ njikọ njikọta abụghị ihe dị mfe na dị mfe dị ka ọ dị, dịka ọmụmaatụ, afọ abụọ ma ọ bụ atọ gara aga. Oge ochie a dị ogologo.
N'oge a, ịnwere ike ịmepụta backlinks nke ọma maka weebụsaịtị nanị mgbe ị na-eji atụmatụ mmemme ndị dị mma, na nsonye na ịmebe atụmatụ izugbe SEO nyochaa ma gbanwee n'azụ ha. Ma, ọ ka dị mkpa ka ọ ghara ichegbu onwe gị - ebe a na-abịa ụzọ abụọ eji eme ihe iji gosipụta njikọ dị mma. Ihe niile ị chọrọ ebe a bụ itinye oge na mgbalị - itinye na ị bụghị otu n'ime ndị na-adịghị mma-aka-aka - na njikọ njikọ gị dị mma. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ihe ndị na-esonụ ga-ewere ihe ọ bụla karịa naanị nkeji ole na ole ka ị nwee ihe niile dị na ya, ha agaghị enwe ike ime ka ha dị mma karịa SEO.Ya mere, n'okpuru bụ ụfọdụ n'ime ụzọ m kachasị egosipụta ụzọ iji mepụta backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ - dịka ọdịdị, rụọ ọrụ nke ọma na nke na-enweghị ụgwọ penny.
O doro anya na, na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa na-ebi ndụ nwere ozi pụrụ iche, mma na n'efu na ezigbo ọnụ ahịa bụ ụzọ kasị mma iji mepụta backlinks maka mkpokọta website, n'enweghị ihe ọ bụla ihe ize ndụ nke ịnata ugwo ogo. Nanị ihe ị chọrọ bụ ịnye ọdịnaya dị ike (ọdịnaya ndị siri ike, nchọpụta ọmụmụ, wdg. ) ime ka ndị mmadụ na-ekerịta ya, jikọọ na ya, ma kwuo ya n'ebe ọzọ na Weebụ. N'ụzọ dị otú a, tụlee ịmeghari akụkụ ụfọdụ nke ihe odide edere ederede gị n'ime ihe ọzọ na-apụghị ịghọta na anya, dị ka ihe ọmụma bara uru, akwụkwọ dị iche iche, nchọpụta dị mkpirikpi, eserese, wdg.
Mee ọtụtụ n'ime ndị asọmpi
Ọfọn, ọ dịghị ihe dị njọ na nledo na ndị nlekota gị niche oge ruo n'oge iji mụtakwuo banyere ahụmahụ ha na-aga nke ọma na njikọ na-ewu ụlọ mma-mee ka ọganihu gị gbasie ike n'ụzọ kachasị mma. Egbula oge iji otu n'ime ngwaahịa ndị a na-ewu ewu n'ịntanetị maka nchọpụta azụ na nyocha dị na ịnweta ohere. Ma mụ onwe m, achọtara m ụlọ ọrụ ndị na-esonụ dị ka ihe bara uru iji nweta nghọta na-asọmpi bara uru - Moz's Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), Fream Frog SEO Spider. Ihe niile nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'ebe ahụ. Naanị tụlee ụzọ ndị a na-enyocharịrị ụzọ gaa na nke kacha elu PageRank na ikike ndị isi iji mepụta backlinks maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog nke gị.
Inwe ihe siri ike iji wepụta akara azụ azụ dị mma ma jiri nkwekọrịta gị niche iji mee ka ha nweta mmeri kacha mma maka ọdịmma gị - ga-adị mma ma ka ezughị. N'ụzọ dị otú ahụ, jide n'aka na ị na-arụ ọrụ ọ bụghị naanị maka ịzụlite azụ backlinks onwe ha, mana maka ike gị dị ike na nghọta ọha na eze. Tụlee ịjụ ajụjụ ọnụ gị na ụlọ ọrụ gị, na-adọta ndị na-ege ntị na-ewu ewu na mgbasa ozi na-ewu ewu na Social Media, na-agbasawanye ihe ndị kachasị mma gị site na edemede na isiokwu dị iche iche, yana ịnye ihe ndị dị nro na nghọta iji nweta mkpado backlinks.